Apt3@EdenBrae-Tranquil, Walkable, Pet-Friendly, Best Retreat in Bham - I-Airbnb
383 okushiwo abanye
Enye yezindawo eziqashiswayo ezibanda kunazo zonke edolobheni, leli fulethi eligcwele umbhede ongu-1/1 yokugezela eligcwele ilanga liyindawo efanelekile yokubaleka futhi uphumule. Uzoyithanda le ndlela yokuzilibazisa ehamba kahle futhi ezolile. Jabulela izindawo ezinhle zangaphandle zale ndawo, okuhlanganisa umpheme ongaphambili obanzi, umgodi womlilo, indawo yokuphumula engaphandle ekhishiwe, igrill yegesi yemvelo, i-foosball, i-cornhole, ama-hammocks nemithombo. Ihlanzwe ngokomsebenzi futhi yagcwala ngokugcwele ikhofi lasendaweni, ukukhethwa okubanzi kwetiye, nazo zonke izinto zangasese eziphilayo, ze-paraben, nezingenalunya ongase uzidinge. Zijabulise nge-wifi yamahhala engenamkhawulo, i-Netflix, i-Hulu, ne-Disney+. Ngeke ufune ukuhamba! I-Pet-friendly futhi iyahamba futhi!
Ingabe ufuna ukuhlola indawo? Zama i-walkthrough yethu ebonakalayo: https://my.matterport.com/show/?m=V3Y5Na4fGmm
Ukuhlanganisa ingxube yevintage neyesimanje, leli fulethi ligcwele isitayela. Nethezeka futhi ucwilise ilanga ezihlalweni zocezu eziwolintshi zakudala, ezihlala ngaphansi kwamawindi amade, agcwele ukukhanya. Ingabe ufuna ukuthola izinhlelo zakho ozithandayo ngenkathi ulapha? Akuyona inkinga! Donsa imithunzi futhi ukhululeke kusofa ngenkathi uzitika ngawo wonke ama-Netflix, i-Disney+, ne-Hulu ongathanda ku-smart RokuTV yethu. Isofa elisendlini yokuphumula liwumbhede wosuku omabili, okuvumela ukuthi ulale izivakashi ezengeziwe uma kudingeka. Imicamelo eyengeziwe nezingubo zokulala kunikezwa ukuze ukhululeke futhi kube lula.
Uma usuka kude, uzothola ikhishi eligcwele kahle elinakho konke ongase ukudinge ukuze uhlale isikhashana. Ifriji/ifriji egcwele, ihhavini le-convection toaster, i-induction burner, kanye ne-microwave kukuvumela ukuthi wenze ukudla okuningi endlini. Sigcwalise amadrowa anezinhlobonhlobo zezimpahla zasekhishini -- konke okudingeka ukwenze futhi ujabulele ukudla okusha. Ngomshini wokugaya i-burr nomshini wokucindezela we-french, uzokwenza inkomishi emnandi yekhofi lasendaweni njalo ekuseni. Futhi, uma ikhofi lingeyona into yakho, siphinde sigcine izinhlobonhlobo eziningi zetiye le-Stash le-herbal ne-caffeine. Jabulela ukudla kwakho okusha etafuleni lebha esesitayeleni nelikhululekile, elibheke egumbini lokuphumula.
Igumbi lokulala lifakwe kukho konke ukunethezeka kwekhaya. Igumbi lokulala elikhulu, elinendawo eningi yombhede wenkosi, lizozizwa linobukhazikhazi. Umbhede othokomele, onomatilasi be-memory foam, amashidi e-Buttery Comphy, nemicamelo eminingi, kuzokusiza uthole ukuphumula okuhle ebusuku. Igumbi elanele etafuleni laseceleni kombhede ukukusiza uzizwe ukhululekile ebusuku. I-daybed yosayizi ophindwe kabili ihlala maqondana nombhede futhi iyindawo enhle yokunethezeka nokufunda. Umatilasi we-memory foam wenza lokhu kube umbhede othokomele owengeziwe womuntu omdala noma wabancane. Letha eyakho incwadi, noma ujabulele eyethu!
Esikhundleni sekhabethe, sinokuwabona okulula namashalofu ukuze uwakhiphe ngokushesha futhi uzenzele ekhaya. Unezinto ezimbalwa ongazilengisa? Sikukhavelile. Ilondolo esakhiweni, kanye ne-ayina nebhodi loku-ayina, kuzoqinisekisa ukuthi ubukeka kahle kakhulu.
Sithanda leli gumbi lokugezela, futhi sithemba ukuthi nawe uzolithanda! Ama-nook azungeze usinki, anikeza izidingo. Sizama ukulindela izidingo zezivakashi zethu, okuhlanganisa izinto zangasese, namathawula amaningi amasha alinde izivakashi zethu. Igumbi lokuhamba eshaweni lilula futhi lihlanzekile. Uzothanda ikhanda leshawa lemvula nebhentshi elivulekile. Sihlinzeka nge-organic, paraben- kanye ne-shampoo engenalunya, i-conditioner, ukugeza umzimba, kanye nelotion, ngakho-ke asikho isidingo sokuletha eyakho.
Phuma ngaphandle komnyango wakho wangaphambili, futhi i-patio yangasese ikulindile. Yabelana ngenkomishi yekhofi nelanga lasekuseni. Noma, uma ufuna ukusabalala, hlala ezindaweni zokuphumula zase-Brazilian ngemuva kwendlu. Uma ufuna ukupheka isoso ngenkathi unathi, uzoyithanda indawo engemuva enegrill yegesi yemvelo yezishisi ezi-5, indawo epholile, nebha eyakhelwe ngaphakathi. Jabulela ukudla kwakho endlini yokudlela engaphandle negumbi lokuphumula elisikiwe.
Lesi sithabathaba, esiqanjwe ngokuthi i-Eden Brae, sakhiwa ngo-1910, futhi sitholakala ku-Cliff Road, okungesinye semigwaqo efiseleka kakhulu nehamba kalula edolobheni laseBirmingham. Inamafulethi amahlanu ahlukene, ngalinye linendawo yalo yokungena yangasese. Uma ungathanda ukuqasha indawo yokuhlala eyodwa noma ngaphezulu, sicela usazise. Yonke le mansion iyatholakala futhi ukuze iqashwe ngamaphathi amakhulu.
Amasango ensimbi amahle anikeza indawo evikelekile ukuze ujabulele ikhaya. Izindlela ezihlanzekile, ezikhanyisiwe, kanye nompheme omkhulu ongaphambili zikubingelela lapho ufika futhi zikumema ukuthi uhlole indawo. Amabhubesi asekhaya kanye nezinye izici zezakhiwo zakha indawo efudumele nejabulisayo yokuhlala.
Hamba uzungeze inkundla yendawo, futhi uzothola izindawo eziningi zokuphumula nokuzijabulisa. I-screened kuvulandi ngemuva kwendlu inikeza indawo enhle yokuphumula. Lesi sikhala siqukethe itafula lokudlela lomphakathi labantu abangu-12 kanye nebhentshi elinethezekile elikhulu, elitholakala ofike kuqala, elinikeza zonke izivakashi kuqala.
Uma ufuna ukupheka ngesikhathi sokuhlala kwakho, sikuphathele! Izivakashi zamukelekile ukusebenzisa ikhishi elingaphandle, elidlala i-grill entsha, isifuba seqhwa esikhulu, kanye nebha yokusebenza enkulukazi. I-Kenmore Elite i-grill yemvelo eshisayo emihlanu inokubili into eshisayo kanye ne-side burner eyengeziwe yokushisisa amasoso nezinhlangothi. Noma, thatha isihlwathi noma ugone ngaphansi kwezihlahla zomsedari kwenye yama-hammocks ethu anosayizi omkhulu, wase-Brazilian double.
Sinikeza amafulethi amaningi, noma ngisho nendlu yonke, yamaqembu amakhulu nemicimbi ekhethekile. Uma udinga indawo eyengeziwe noma unentshisekelo kwezinye izinketho, bheka ezinye izindlu zethu kulesi sakhiwo: https://www.airbnb.com/users/11135038/listings
4.90 · 383 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-383
Ngenkathi usenathi, qiniseka ukuthi uyaphuma uye endaweni. Emabhuloki ambalwa nje, uzothola amapaki, izindawo zokudlela, ikhofi, igalofu, kanye nethenisi!
IHighland Park Golf kanye neTennis Club ikude nje. Kuvulekele umphakathi, kulula kakhulu ukudlala igalofu noma umdlalo wethenisi ngesikhathi uhlala. Njengoba kunezimo ezimangalisayo zezifundo kanye nokubukwa okumangalisayo kwesibhakabhaka sedolobha, inkundla yegalofu i-Highland Park ithandwa abantu bendawo kanye nezivakashi ngokufanayo. Dlala izimbobo ezingu-9- noma ezingu-18 noma ujabulele ibanga lokushayela. Izikhathi zokudlala kulula ukuzibhukha ku-inthanethi, mathupha, noma ngocingo. Uma ithenisi kuwumdlalo wakho, usenhlanhleni. I-Highland Park Racquet Club ingumakhelwane futhi kulula ukuyifinyelela. Izinkantolo zobumba nezinkantolo eziqinile ziyatholakala ukuze kudlale umdlalo owodwa noma ophindwe kabili.
Uma usesimweni sokuthile okukhululekile, isonto ekhoneni linendlela enhle yomphakathi yokuzindla ngamatshe. I-Rushton Park, enye yamapaki amathathu axhumeke ku-Highland Avenue, iqhele ngamabhlokhi ambalwa. Intandokazi phakathi kwabantu bendawo, indawo enhle yokujabulela usuku oluhle. Uma uhamba nezingane, uzoyithanda inkundla yokudlala enamasango yase-Rushton Park. Noma, uma ufuna okuthile okusebenzayo, zama inkundla ye-basketball yepaki noma inkundla ye-volleyball. Ngaphandle nje kwepaki, uzothola izindawo zokudlela ezimbalwa ezidumile zasendaweni. Uma usesimweni sekhofi noma amakhekhe, zama i-O'Henry's. Noma, hamba eduze kwakho uye e-Rojo, indawo yokudlela edumile yase-Mexico enendawo yokudlela yangaphakathi nangaphandle. Ilungele izinja futhi ivamise ukufaka umculo obukhoma nokuzijabulisa.
Sineqembu lendawo labahlanzi nabalungisayo, uma kwenzeka kuba nezinkinga ngesikhathi uhlala, kodwa ingxenye enkulu, sizama ukukunikeza isikhala ukuze ujabulele ukuhlala kwakho. Uma usidinga, wamukelekile ukusithumelela umlayezo, noma uma usibona esizeni, sicela usazise ukuthi singasiza kanjani. Siyajabula ukwenza ingxenye yethu ukwenza ukuhlala kwakho kujabulise kakhudlwana.
Sineqembu lendawo labahlanzi nabalungisayo, uma kwenzeka kuba nezinkinga ngesikhathi uhlala, kodwa ingxenye enkulu, sizama ukukunikeza isikhala ukuze ujabulele ukuhlala kwakho. Uma…